Waa kuma Qaasim Suleymaani, Jeneraalka laf-dhabarka u ahaa Iran ee Mareykanka uu dilay? - Latest News Updates
Waa kuma Qaasim Suleymaani, Jeneraalka laf-dhabarka u ahaa Iran ee Mareykanka uu dilay?
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay duqeyn dhanka cirka ah ku dishay Jeneraal Qaasim Suleymaani Soleimani oo ahaa madaxa cutub kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Quds.
Wasaaradda gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dilka Qaasim Sulaymaani uu amray Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump. Soleimani ayaa lagu dilay meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha ee Baqdad ee dalka Ciraaq.
Haddaba waa kuma Jeneraal Qaasim Sulaymaani?
Goormuu awood yeeshay Qaasim Sulaymaani?
Saameynta ciidamada Quds